नि’र्म’ला प’न्तको ह’त्या’रा स’मात्न प्रहरी परिचालन ! - हाम्रो देश
नि’र्म’ला प’न्तको ह’त्या’रा स’मात्न प्रहरी परिचालन !
काठमाडौं – कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया कि’शोरी नि’र्म’ला प’न्तको ब’ला’त्का’र’पछि ह’त्या प्रकरण सु’ल्झाउने तयारीमा नेपाल प्रहरी छ। लामो समयसम्म नि’र्म’ला’को ह’त्या’रा प’त्ता लगाउन अ’सफल भएपछि चौ’त’र्फी आ’लोचना खे’प्दै आएको प्रहरीले नि’र्म’ला’को ह’त्या’रा पत्ता लगाएको दा’वी गरेको छ।
लामो समयपछि नि’र्म’ला प्र’करणमा सफलता मि’ले’को दा’बी गरेको सुदूरपश्चिम प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा पूर्व प्रहरीहरूको पनि सहयोग लिएको स्रोतको दा’बी छ । स्रोतका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) उत्तम सुवेदीले सो क्षेत्रका पूर्वप्रहरीलाई समेत हातमा लिएर अनुसन्धानलाई नयाँ शै’लीबाट उठाएका थिए।
स्था’नीयसँगै लामो समय घु’लमिल गरेका प्रहरीले ह’त्या’रा प’त्ता ल’गाएको र छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत गरेको प्रहरी स्रोतको दा’बी छ । ‘नि’र्म’ला प’न्त ह’त्या’का अ’भि’यु’क्त पत्ता ला’गेको र छि’ट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ अनुसन्धानमा सं’लग्न एक प्रहरी अधिकारीले भने।
सरकार र प्रहरी सं’गठ’नलाई टा’उको दु’खाईको बिषय बनेको थियो-नि’र्म’ला प्र’करण । केही प्रहरीलाई अ’भियु’क्त बस्न सक्ने सम्भावित ठाँउको पहिचान गरी विभिन्न भेषमा प’रिचालन गरिएको थियो । त्यहाँका लागि सा’दा पो’शाकका प्रहरी लामो समयदेखि स्थानीयसँग घु’लमि’ल गरेका थिए।
उनीहरु विभिन्न वा’हा’नामा स्थानीयसँग घु’लमि’ल गरेपछि ह’त्याका विषयमा न’जानिँ’दो तरिकाले कुराहरु गर्ने गरेको प्रहरी स्रो’तले जानकारी दिएको छ। त्यसपछि घ’टनामा भे’टिएका प्र’माण र ति व्यक्तिका विषयमा प्रहरीले केही समय अगाडिदेखि नै अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरी स्रोतकाअनुसार अझै पनि ह’त्या’रा’को आ’रो’पी व्यक्ति पक्राउ भने परेका छैनन्।
उनलाई अझै क’डा नि’गरानीमा राखिएको र छि’ट्टै पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्ने योजनामा प्रहरी रहेको छ। ’र्म’ला’को ह’त्या भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा निकै सुक्ष्म अनुसन्धानपछि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याएको दा’वीसँगै ह’त्या’रा छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त कुँवरले जानकारी दिए।
यसअघि ह’त्या’को आशंकामा केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा कञ्चनपुरमा मात्र नभए देशभर आ’न्दो’लन’को स्थिति बनेको थियो। तर, पछि सो आ’न्दो’ल’न ग’लत रहेको पनि कति अनुसन्धानले दे’खाएको थियो। प्रहरीले शुरूमा कञ्चनपुरको भी’मदत्त नगरपालिकाका दि’लिपसिं’ह विष्टलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो।
तर पछि प्र’मा’ण नपुगेको भन्दै छा’ड्’नु परेको थियो। तर, यसपटक भने त्यस्तो अवस्था न’आउने र प्र’माणसहित अदालतमा बु’झाउने प्रहरीको भनाइ छ। नि’र्म’ला’को गत १० साउन २०७५ मा घरनजिकैको उ’खुबारीमा श’व फेला परेको थियो।